Hisondrotra amin'ny taona 2021 ny varotra haino aman-jery sosialy rehefa mijery ny mpivarotra an-tserasera ny marika
Tsy ny mpividy ihany no mividy matetika amin'ny Internet, fa mety hanomboka ny diany miantsena amin'ny media sosialy. Ny sehatra sosialy toa ny Instagram sy ny Facebook dia loharanom-pahalalana mahazatra amin'ny marika ary antenaina hitohy hatramin'ny 2021 izany, miaraka amin'ny angona vaovao mampiseho izany fivarotana mar ...
Fanomezana tsy manam-potoana azo antoka hanomezana fampiononana amin'ny lamaody amin'ity fialantsasatra ity
Amin'ity vanim-potoana fialantsasatra ity dia mety ho hafa kely ny traikefa mahavelom-bolo fa ny mahita ny tonga lafatra ankehitriny no tanjona ihany. Rehefa mihamangatsiaka ny andro ary miomana hidoboka ao an-tranony ny olona, ​​dia hendry ny mpiambina mitady zavatra izay manome fampiononana, fahamendrehana ary fahafaham-po. Gifting ...
Kiraro inona no tokony hataoko amin'ny fiaramanidina
Alao sary an-tsaina ny seho: eo amin'ny seranam-piaramanidina ianao, feno kitapo, mitaingina ny sidinao. Maka ny sezanao ianao, mifatotra ny fehin-kibonao ary miondrika. Rehefa afaka kelikely, dia manomboka marary ny tongotrao satria tsy manao kiraro sahaza ianao - ary tsy dia misy zavatra azonao atao loatra mandra-piavinao. Aiza ny tsapanao fialan-tsasatra ...
New Balanc dia mamoaka ny Sneaker 10 taona fankalazana mandritra ny fialantsasatra
New Balance sy J. Crew dia niaraka niaraka tamin'ny entana iray hafa izay tianao ampiana amin'ny lisitry ny Noely amin'ity taona ity. Mba hankalazana ny fiaraha-miasa efa am-polony taona lasa izay, ireo marika dia namorona kiraro kiraro azo tsidihina miaraka amin'ny hatsembohana na slacks amin'ity fetin'ny fialantsasatra ity. Ny sneak New Balance x J.Crew 997 faha-10 taonan'ny ...
Adidas Yeezy Boost 380 'Onyx' Styles dia mivoaka amin'ity herinandro ity
Ny lafiny ilan'ny Adidas Yeezy Boost 380 amin'ny làlana miloko "Onyx". Andalana roa Adidas Yeezy Boost 380 no mamely fivarotana amin'ity herinandro ity. Ny goavambe fanatanjahan-tena dia nanamafy fa ny kiraro noforonin'i Kanye West dia mamoaka amin'ny alàlan'ny "Onyx Reflective" sy "Onyx" miafina ity F ...
Ny andron'ny mpitovo an'i Alibaba dia nahatratra 70 tapitrisa miliara mahery ny varotra hatreto
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-11-12
Jery ​​todika ny isa novokarin'i Alibaba tamin'ny hetsika fiantsenana isan-taona ho an'ny Singles. Nofonosin'i Alibaba tamin'ny fomba ofisialy ny fankalazana ny faha-12 taona faha-11.11 Global Festival Festival, fantatry ny besinimaro eran'izao tontolo izao amin'ny hoe Andron'ny Mpitovo. Taorian'ny fampiroboroboana ny fiantsenana dia nanambara ny behemoth e-commerce ...
Jumpman Shoe Nike's Auto-Lacing Tech Ho an'ny Ikonika Air Jordan 11
Jordan Brand dia mitondra ny haitao Nike Adapt ho an'ny Air Jordan 11. Mampiseho ny androany ny Air Jordan 11 Adapt, kiraro iray manana haitao malaza amin'ny Swoosh. Na dia maoderina aza ny teknolojia, nanambara i Jordan Brand fa ny tsy fananana laceless dia ...
Simpsons sy Van indray ny fihaonana vaovao amin'ny fahatongavan'ireo kiraro Krismasy
Ny lafiny ilan'ny "The Simpsons" x Vans Slip-On "Holiday." Vans sy "The Simpsons" dia nanatevin-daharana indray, tamin'ity indray mitoraka ity dia namoaka fanangonana kiraro kiraro vaovao azon'ireo mpankafy namboarina. Ny marika skatewear sy ilay fampisehoana hatsikana efa ela nihetsika ...
Ireo ve no fironana mpihaza fahavaratra lehibe indrindra?
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 20-06-05
Raha mibanjina ny kiraronao ianao dia manontany tena raha toa ka mbola zavatra iray ny dakan'ny dadanao taloha, azonay daholo ny valiny ilainao. Ity taona ity dia mety hanamarika ny fiandohan'ny folo taona vaovao, fa na izany aza, ny fironana sneaker lehibe indrindra amin'ny fahavaratra dia mitondra antsika hiverina amin'ny fotoana. (Mihorakoraka mankany ...
Ireo mpiasa mpitsabo eo amin'ny tsipika voalohany amin'ny coronavirus dia tokony hanana antoka ny hanadiovany ny kirarony.
Tao amin'ny fanadihadiana vaovao navoaka tao amin'ny iray amin'ireo ivon-toeran'ny Centers for Disease Control and Prevention, aretina Mihanaka, ireo mpikaroka dia nanandrana santionany amin'ny rivotra sy ny tany amin'ny hopitaly. Hitan'ny mpikaroka fa manodidina ny antsasaky ny matihanina amin'ny fitsaboana ara-pahasalamana miasa amin'ny c ...
Ny toekarena pandemika: inona ireo mpividy mividy an-tserasera mandritra ny COVID-19?
Ny sokajy E-Commerce haingana indrindra ary mihavitsy Ny valanaretina COVID-19 dia misy fiatraikany lehibe amin'ny lafim-piainana rehetra, ao anatin'izany ny fomba fivarotan'ny olona ny zavatra ilainy sy izay tsy ilainy. Miaraka amin'ny varotra antsinjarany an-tserasera mahatratra hatrany amin'ny eye-waterin ...
Address:No. 618 Chonghong Street, faritra fampandrosoana ara-toekarena sy teknolojia Quanzhou, faritanin'i Fujian.